musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Saint Kitts neNevis Kuputsa Nhau » 75% yeSt Kitts neNevis yakanangana nehuwandu hwevanhu vakabayiwa nhomba
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • Saint Kitts neNevis Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Sekure kure-chitsuwa chiri munzvimbo yeCaribbean, St Kitts neNevis vakaita nhanho pamusoro pemakore kuvaka hupfumi hwekuzvitsigira. Mari zhinji yemunyika inoenderana nekushanya.
St Kitts neNevis hurumende inoshandisa anopfuura mamirioni gumi nemasere emadhora kurwisa COVID-18 denda.
Makota matatu eSt Kitts neNevis chinangwa chevanhu chakabaiwa jekiseni rekutanga remushonga weCCV-19.
Mutungamiriri wehurumende akatendawo vatendi vaviri veSt Kitts neNevis nerupo rwavo mukupa majekiseni.
St Kitts naNevis vashandisa pamusoro peEC $ 18 mamirioni ekushandisa matanho ekudzivirira kupararira kwedenda re COVID-19, akadaro Prime Minister Timothy Harris pamusangano wenhau. Akawedzera kuti mari iyi yanga ichishandiswa kuwana mota, mawadhi, nzvimbo dzekuisa vanhu kwese uye rubatsiro rwekuyedza. Mashoko aya anouya apo Mutungamiriri wehurumende akazivisa jekiseni rekutanga-dhizaini inopfuura makumi manomwe neshanu muzana muzana yevaitarisirwa neChipiri svondo rapfuura.
St Kitts uye Nevis Prime Minister Timothy Harris
Sekureva kwaMutungamiriri, Harris, mamwe mamirioni mashanu emadhora pachirongwa ichi chehutano achashandiswa mukupera kwegore. Izvi zvinounza mutengo wese weECOVID-19 inoenderana nemari yekushandisa inopfuura EC $ 23 miriyoni.
Munguva yekero yake chaiyo kuUN General Assembly, akataura kudiwa kwekuenderera mberi nekudyara muhutano hwakasimba. “Tinotenda zvakasimba kuti hapana munhu akachengeteka kudzamara munhu wese akachengeteka. Izvi zvinoda mukana wakaenzana wekubaiwa majekiseni uye nezvimwe zvekurapa, ”akadaro Prime Minister. “Takatora matanho ekupa zvirongwa zvekuchengetedza vanhu kune avo vanoshaya. Chokwadi, isu takaisa EC $ 120 mamirioni COVID-19 inosimudzira package. Takaderedza mutero wemubhadharo wevashandi kuti vachengetedze 75% yevashandi uye takazivisa VAT uye kuendesa kunze kwevanorega mutero zvigadzirwa zvine chekuita nedenda. ”
Mutungamiriri akatendawo St Kitts naNevis'' nyika mbiri dzekudyidzana kwavo mukupa majekiseni. Gurukota rinoona nezvekunze kwenyika, VaMark Brantley, avo vanga vari kuNew York kuUNGA, vatenda Prime Minister weIndia, Narendra Modi nekufambisira kugovana nhomba dzeCOVID-19 nenguva, idzo dzaakati dzakamugonesa kuenda pachiitiko ichi.
Sekure kure-chitsuwa-munzvimbo yeCaribbean, St Kitts naNevis yaita nhanho pamusoro pemakore kuvaka hupfumi hwenyika. Mari zhinji yemunyika inoenderana nekushanya. Mushure mekuvharirwa uye kumiswa kweindasitiri yekushanya, mari yekushandisa Chirongwa Chekuderedza Urombo (PAP) - chirongwa chakanangana nekupa mhuri dzinotambira mari shoma nemutero wemwedzi wega we $ 500 - dzakagadzirwa kuburikidza ne Citizenship neInvestment (CBI) Chirongwa.
Kuburikidza neCBI, varimi vekunze vane mbiri vanopasa kushingairira vanogamuchirwa kuti vatore hunhu hwakakosha hweSt Kitts neNevis mukutsinhana mupiro wezveupfumi. Iyo sarudzo sarudzo inopa nzira inoshanda kwazvo kune wechipiri ugari hwemo.
Vashandi vanokwezva kuSt Kitts neNevis nekuti yakachengeteka, yazvino democracy. Zvese zviri zviviri zvemhuri- uye investor-zvine hushamwari, uko vagari vanogona kuwana nyore kuwedzera kuwedzera kwepasirese kufamba, kusiyanisa hupfumi hwavo uye kuve nePlan B.